Guddoomiyaha baarlamaanka Galmudug oo sheegay in wada hadal ay la geli doonaan Ahlu-sunna “Dhageyso” – Radio Muqdisho
Guddoomiyaha baarlamaanka Galmudug oo sheegay in wada hadal ay la geli doonaan Ahlu-sunna “Dhageyso”
Guddoomiyaha Barlamaanka dowlad goboleedka Galmudug Cali Gacal Casir ayaa sheegay in doorashadii maanta ay ku dhacday si cadaalad ah, isla markaana ay ku dadaalayaan sidii doorashada xigta ee Madaxtinimada u noqon lahayd mid si cadaalad ku dhacda.
Mudane Cali Gacal Casir oo u waramay Radio Muqdisho ayaa tilmaamay in doorasho aad u qurux badan ay maanta ka dhacday hoolka uu ka socdo shirka lagu dhisayo Dowlad goboleedka Galmudug.
“Runtii maamulka Galmudug waxa uu sameeyay waxyaabo aan horey looga baranin dowlad goboleedyadii hore, waxaa laga bartay maamul wanaag iyo isu tanaasul, waxaana rajeynayaa in maamulada kale ee la dhisi doono inay tallaabadaasi qaadaan, waxaan rajo wanaagsan ka qabaa in doorashada Madaxweynaha ay sidii maanta oo kale noogu dhacdo” ayuu yiri Guddoomiye Cali Gacal Casir.
Guddoomiyaha mar uu ka hadlayay arrimaha Ahlusunnna waxa uu sheegay in ay wada hadal la qaadan doonaan, isla markaana waxkasta lagu xalin doono wadahadal iyo is faham, ayna ku dadaalayaan sidii looga qeyb gelin lahaa hanaanka hadda socda ee dhismaha dowlad goboleedka Galmudug.
Tartamayaasha degmada Hodan oo u soo gudbay wareega xiga ee tartan cilmiyeedka